Oke ihu igwe jikọtara na okpomoku ụwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Oke ihu igwe jikọtara ya na okpomoku ụwa
Oge ọ bụla oke omume ga - eme, ma ọ bụ ebili mmiri, ajọ ifufe ma ọ bụ oke mmiri ozuzo, N'afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị echewo ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na o metụtara okpomọkụ ụwa ma ọ bụ na ọ bụghị nke ahụ na-eme na ụwa.
N'ịchọ ị nweta azịza sayensị doro anya, otu otu ndị Noa Diffenbaugh duziri, onye nyocha na Stanlọ Akwụkwọ Mahadum nke Stanford nke Earth, Energy na Environmental Sciences, jikọtara nyocha ọnụ ọgụgụ nke nyocha ihu igwe na usoro kọmputa iji mepụta mmetụta nke okpomoku zuru ụwa ọnụ na ihe omume ihu igwe dị oke egwu.
Ọ bụ ezie na ndị ọkà mmụta sayensị n'oge gara aga zere ijikọ ihe omume ihu igwe ọ bụla na okpomoku ụwa, ebe ọ bụ na ọ na-esiri ha ike ikewapụ mmetụta nke ụmụ mmadụ na ọdịiche nke ihu igwe, taa n'ihi ọganihu sayensị Diffenbaugh na ndị otu ya enweela ike zaa ajụjụ ọtụtụ ugboro a jụrụ: Ọ bụ ihu igwe dị egwu na-akpata okpomoku ụwa?
Dabere na ọmụmụ ahụ nke ebipụtara n'akwụkwọ akụkọ Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), azịza ya doro anya: ee, na ugboro ugboro na-arịwanye elu, ka ọnọdụ okpomọkụ ụwa dum na-arị elu, ihe ndị dị egwu na-eme bụ́ ndị na-etinye ndụ ndị mmadụ n'ihe ize ndụ.
N'eziokwu, emegide nke ihe omume kariri 80% nke elu uwa nke ihe nlere di. N'aka nke ọzọ, maka ihe na-eme oyi na mmiri, ndị ode akwụkwọ chọpụtara na mmetụta nke mmadụ amụbaala nsogbu site n'ihe dịka ọkara mpaghara ebe enwere nkwenye ntụkwasị obi.
Nchoputa ohuru a gha enyere anyi aka imata uzo doro anya nke umu mmadu na eme ihe banyere usoro okike nke uwa.
I nwere ike ịgụ ihe ọmụmụ ahụ ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke ihu igwe jikọtara ya na okpomoku ụwa
Mgbanwe ihu igwe ga-emetụta obodo karịa obodo